Lalàn’ny fifidianana : Tsy ho ela hoy ny Praiminisitra -
AccueilSongandinaLalàn’ny fifidianana : Tsy ho ela hoy ny Praiminisitra
Lalàn’ny fifidianana : Tsy ho ela hoy ny Praiminisitra
Andalana ny fahavitan’ny lalàn’ny fifidianana hoy ny praiminisitra lehiben’ny governemanta Mahafaly Solonandrasana Olivier omaly, nandritra ny fanolorana ny tatitra vokatry ny fandalovan’ ny rivodoza ENAWO sy AVA teto Madagasikara. Raha ny tatitry ny praiminisitra lehiben’ ny governemanta omaly ihany, dia efa anatin’ny fanatsarana ireo manam-pahaizana amin’izao fotoana “ ho anay eto anivon’ny mpanatanteraka, ary tafiditra anatin’izany ihany koa ny efa nambaran’ny filoham-pirenena hoe lalàm-pifidianana tsy ahitana olana, ary ahafahana manatanteraka fifidianana ampilaminana no ilaina” hoy hatrany ity tompon’andraikitra voalohany etsy Mahazoarivo ity. Noho izany dia mazava fa efa ankatoka ny fahavitan’ny lalàna, ary ny fanamboarana sy ny kipitsopitsony sisa andrasana “Efa tsy mandry andro tsy mandry alina ny governemanta, ary ny filoha no lohalaharana amin’ny hahavitan’io lalàna io”. Ny fitondram-panjakana rahateo, izay efa nilaza fa fifidianana madio sy mangarahara no ilaina eto amin’ny firenena, ary fifidianana lavitry ny korontana ihany koa. Noho izany ilaina ny fandalinana mba ahafahana manatanteraka ny vina izay hahasoa ny firenena iray manontolo izany.
Handalo antanan-tohatra sy andrim-panjakana ity lalàn’ny fifidianana ity vao azo ampiharina amin’ny fifidianana izay hotanterahina, anatin’izany ny fankatoavana azy eo anivon’ny filankevitry ny governemanta, ny eny amin’ny antenimieram-pirenena. Ny azo antenaina izany ho mariky ny fahavitan’ny famolavolana ny lalàm-pifidianana, dia ny handinihina azy eo amin’ny filankevitry ny governemanta, ary ihany koa ny fiantsoana fivoriana tsy ara-potoana ho an’ ireo mpikambana eo anivon’ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-doholona. Maro amin’ ireo solombavambahoaka anefa no milaza fa azo tsara ihany koa ny mandinika ity lalàna izay andrasan’ny besinimaro ity, ho amin’ny fivoriana ara-potoana izay hanomboka any amin’ ny talata voalohan’ny volana martsa. Noho izany efa tomombana avokoa ny rehetra, ary miandry ny fotoana sisa. Raha ny fanazavana fohy nentin’ny praiminisitra mikasika izay ho votoatin’ ny lalàna izay hivoka kosa dia tahaka izao “ tsy miala amin’ ny soso-kevitra avy amin’ ny mpiara-miombon’antoka sy avy amin’ ireo mpanao politika isika, ary izay no narafitra” hoy hatrany ny praiminisitra.